Sare & Cunto; 3 Sababaha Sababta Muxuu Maqaasiinkaagu Yarayn Karaa Your Rankings
Haddii aad aaminsan tahay in aad samaysay wax kasta oo haboon, waxaa laga yaabaa inaad qaldan tahay maaddaama had iyo jeer wax laga wanaajiyo. Waxaad u baahan tahay inaad waxbarto oo ku saabsan sida kor loogu qaado badeecadaha internetka, baro qiyamka shirkadda iyo xeeladaha suuq-geynta. Iyada oo dhammaan barashadu socoto, sida loo sameeyo suurtagal in lafilayo waxyaabahaaga iyo in aad si habsami leh u iibsato!
Halkan Oliver King, oo ah xirfadle sare oo ah Semmat , ayaa ka hadlay 3 sababood oo nuxurkaaga nuugaya.
1 - vichy idealia pro serum pret. Naftaada waad jeceshahay.
Waa wanaagsan tahay inaad ku qanciso oo aad u mahadsantid dadaalkaaga, laakiin inaad naftaada ku raaxaysatid wax badan ayaa kuu keeni kara dhibaato. Macaamiishu marnaba ha dareenin aqoonsigaaga ama asalkaaga. Waa maxay waxyaabaha muhiimka u ah iyaga ayaa ah sida fiican ee alaabtaada ama adeeggaaga u yahay iyaga iyo sida ay u xalin karaan dhibaatooyinkooda. Haddii aad naftaada u qortay nuxur ahaan, waxaa jira fursado aadan iibsan doonin. Hubso in waxyaabaha aad ka koobantahay ay calaamad u yihiin oo ay ka soo baxayaan filashada akhristayaashaada, iyaga oo u marsiinaya macaamiisha faraxsan. Waa in aad diirada saartaa abuuritaanka maqaallo iyo maqaallo u ah dhagaystayaashaada, iyo haddii aad u abuurto naftaada, waxaad u maleyneysaa inaad si dhaqso ah uga baxday suuqa ganacsiga. Waa inaad ka qaadataa dhagaystayaashaada iyo daryeelkaaga ku saabsan dhadhanka halkii aan danta shakhsi ahaaneed iyo jeclaan lahayn. Ku qor mawduucyada ku habboon adeegaaga iyo alaabooyinka ilaa xad, siinta akhristayaasha macluumaadka waxtar leh ee ku saabsan astaantaada..
2. Adigu waxaad naftaada u qoreysaa nuxurkaaga, ma ahan dhagaystayaashaada.
Mid ka mid ah meelaha ugu waawayn ee ku soo caan baxa calaamadda ayaa ah in dadka intooda badani qoraan nuxurkooda naftooda, ee ma aha akhristayaashooda. Shaqadaadu waa inaad ku qorto waxyaabaha aad ka helayso dhagaystayaashaada, inaad hubiso in ay ka soo baxayso filashooyinkooda. Waa inaad maskaxda ku haysaa hal shay: "Anigu ma ihi macaamadayda." Hubso in qoraalka aad qoreysid uusan ahayn mid ku qanacsan shakhsi ahaan, laakiin dadka dhagaystayaasha ah. Qaar badan oo ka mid ah xirfadleyda iyo macaamil-bixiyayaashu waxay abuuraan maqaallo iyaga u gaar ah oo walxo badan oo ereyada muhiimka ah - waxay xoojiyaan ajandaha macaamiishooda 'thorats oo rumeeysan in ay dhadhamin doonaan isla. Waa inaad ka fekertaa sanduuqa haddii aad rabto inaad ku guuleysatid guul iyo inaadan isku dayin inaad maskaxda ka jiidato dhagaystayaashaada
3. Wax soo saarka macdantu waa caloosha
Waa mid ka mid ah khaladaadka waaweyn ee aan sameyno. Bloggers iyo qorayaasha content waxay aaminsan yihiin in soo-saarka content uu yahay wax aan faa'iido lahayn, laakiin taasi maaha. Waxaan arkay dad badan oo qoraallo qoraya oo doonaya in ay 100 doolar ku soo celiyaan $ 1500 doolar maalmo, taas oo aan macquul ahayn qofna. Qorayaasha maaddada liita ayaa xitaa diyaar u ah inay qoraan waxyaabahaaga sida ugu hooseeya $ 2 doolar. Toddobaadyada ama bilaha ka dib, waxaad ogaan doontaa in dadaalkaagu uu muujiyay inuu yahay mid aan waxtar lahayn maadaama mawduuca boggaaga uusan ahayn mid wax tar leh oo waxtar leh u ah akhristayaasha.
Wareegyada iyo shabakadaha waxaa loola jeedaa in ay noqdaan kuwo faa'iido leh oo firfircooni leh, waana inaadan waxyeeleynin sumcaddaada waxyaabo yar oo tayo leh. Ugu dambeyntii, waa inaad isku daydaa inaad qorato maqaallo wax ku-ool ah oo aanad kalsooni ku qabin arrintan. Waa inaadan wakhti iyo lacagba ku dhicin qoraallo aan khibrad lahayn oo isku day inaad wax waliba ku qorto. Waa inaad ka hadashaa sida loo xalliyo dhibaatooyinka, ka sheekee arimaha jilicsan, iyo in aad ka soo horjeesatid habka suuq-geynta.